अब कोरोनाभाइरस संक्रमण भए–नभएको रिपोर्ट १२ मिनेटमै पाइने ! - Sacho Post
अब कोरोनाभाइरस संक्रमण भए–नभएको रिपोर्ट १२ मिनेटमै पाइने !
२०७७ भाद्र ११, बिहीबार ०३:३६ बजे
काठमाडौं। अब कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भए–नभएको रिपोर्ट १२ मिनेटमै पाइने भएको छ । अमेरिकाको मासाचुसेट्समा रहेको कम्पनी लुमिराडिएक्सले यस्तो किट तयार पारेको हो । यो किटले केवल १२ मिनेटमै कुनै पनि व्यक्ति कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएको वा नभएको रिपोर्ट दिन्छ । यो टेस्ट किट किन्नका लागि स्कटल्याण्डको नेशनल हेल्थ सर्भिसले लुमिराडिएक्ससँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।
बीबीसीको रिपोर्टअनुसारस्कटल्याण्ड सरकारले यो मेसिन ३ सय थान किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ । ३०० थान मेसिन र कम्तीमा ५ लाख टेस्टको लागि स्कटल्याण्ड सरकारले ६७ लाख पाउण्ड (झण्डै १ अर्ब ५ करोड नेपाली रुपैयाँ) तिर्ने भएको छ । स्कटल्याण्ड सरकारका मन्त्री इभान मेक्कीका अनुसार लुमिराडिएक्ससँग जुन सम्झौता भएको छ त्यस अन्तर्गत कम्पनीले स्कटल्याण्डको स्वास्थ्य सेजा एजेन्सीलाई १२ मिनेटमा हुने कोरोना टेस्टिङको आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउनेछ । भाइरसविरुद्धको लडाइमा यो महत्जपूर्ण भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार यो टेस्टिङ किटमा एउटा खास किसिमको स्ट्रिप प्रयोग गरिनेछ जो स्कटल्याण्डमै बनाइनेछ । यसबाट स्कटिश नागरिकको लागि रोजगारीको अवसर पनि सृजना हुनेछ र यसले देशको उद्योगलाई पनि बलियो बनाउनेछ । रिपोर्टका अनुसार यो टेस्टमा नाकबाट लिइएको स्वाबको परीक्षण कोरोनाभाइरस एन्टिजन प्रोटिनको लागि गरिनेछ । टेस्टको नतिजा केवल १२ मिनेटमा आउनेछ । यो टेस्ट किटको सबैभन्दा खास कुरा यसलाई सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिनेछ र साना क्लिनिक र मोबाइल अस्पतालमा यसको प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
यो टेस्ट किट बनाउने कम्पनी लुमिराडिएक्सका प्रमुख कार्यकारी रोन ज्वानपजगरका अनुसार यो किटबाट नतिजा छिटो आउने मात्र नभइ सटिक नतिजा पनि आउनेछ । यसको नतिजाको आधारमा डाक्टरले सकेसक्क छिटो बिरामीको उपचार सुरु गर्न सक्न्े उनले बताए ।
उदारणीय घरबेटी : जसले कोरोना देखिएर बाहिरै बसेकी डेरावाललाई घरमै आइसोलेसन बनाइदिए
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विहीबार थप ८ जनाको मृत्यु